KDE SC 4.10 Azo alaina: Andao hojerentsika izay vaovao | Avy amin'ny Linux
KDE SC 4.10 Azo alaina: Andao hojerentsika izay vaovao
Tonga ny andro andrasan'ny maro. Nisy izany nanambara ny fisian'ny KDE SC 4.10, tontolon'ny Desktop izay tonga feno vaovao sy fiasa mahaliana. Andao hodinihintsika ny sasany amin'izy ireo.
Ny Plasma Workspace dia voadio be. Mitohy ny asa amin'ny fanavaozana ireo widget miaraka amin'ireo vaovao namboarina niaraka tamin'ny Qt Quick. Ity ezaka ity dia mitondra fanatsarana amin'ny tsy fitoviana, ny fitondran-tena amin'ny famolavolana, ny fitoniana, ny fampiasana azy ary ny fahombiazany. Mora kokoa koa izao ny mamorona widgets, ary fanatsarana manokana. Nohavaozina ho QML ihany koa ny motera valin-drakitra, noho izany dia mora kokoa ny manoratra sary an-tsary mihetsika. (QML dia ao anatin'ny rafitra fampiharana Qt Quick.)
Ho fanampin'ny fanatsarana mifandraika amin'ny Qt Quick sy QML, ny widget an'ny Task dia nahazo fanavaozana azo ampiasaina, miaraka amin'ny fijerena vondrona vondrona varavarankely. Nisy ihany koa ny fanatsarana ny rafitry ny fampandrenesana, indrindra eo amin'ny sehatry ny fitantanana angovo. Ankehitriny dia misy ny fanohanana nohatsaraina ho an'ny fampisehoana avo lenta sy lohahevitra Air vaovao izay mampihena ny fikorontanan'ny fahitana ary manome endrika madio kokoa ny sehatry ny Plasma.
1 KWin Window Manager sy mpamorona
2 Masinina metadata haingana kokoa ary azo itokisana
3 New Manager Manager
4 Mpitantana rakitra Dolphin
5 Fampandrenesana tsy dia manelingelina an'i Kate
6 Fanatsarana ny konsole
7 Tiled Rendering hanatsarana ny fampisehoana Okular
8 Nahazo fanampiana i Gwenview ho an'ny activités
9 Ny Kontact dia manatsara ny zava-bita
10 Fanatsarana ny fampiharana lalao lehibe
KWin Window Manager sy mpamorona
KWin manampy effets fanampiny sy script izay misy amin'ny fifanakalozan-kevitra KWin. Misy vokany vaovao tena kanto rehefa mampitombo ny varavarankely na manova fanjakana.
KWin izao dia mahatsikaritra masinina virtoaly vitsivitsy ary mamela ny famoronana OpenGL raha azo atao. Ankoatr'izay, ny mpamily AMD tompony dia manana fanohanana OpenGL. Ny fanohanana ny fikarohan-drindrina ao KWin dia nesorina satria nanana olana momba ny fitoniana izy, tsy nanana fanohanana marobe, ary nifanipaka tamin'ny faritra hafa tao KWin.
Ny fampiharana isan-karazany izao dia manohana ny fanitsian-doko mba hahafahana manitsy azy araka ny mombamomba ny lokon'ny mpanara-maso sy mpanonta. Ny fanohanana ny fitantanana loko ao Kwin dia natao hanamaivanana ny mpamorona an'io asa io. Io dia ahafahan'ny mpampiasa manafoana ny fitantanana loko ary manamora ny fikojakojana kaody.
Ny appmenu vaovao an'ny KDE mamela ny menio iraisana ho an'ny rindranasa marobe mandeha miaraka. Izy io dia manana safidy hanehoana menio ambony izay miafina amin'ny alàlan'ny default ary miseho rehefa mihetsika eo akaikin'ny sisin'ny tampon'ny efijery ny totozy. Ny bara fisehanan'ny menio dia manaraka ny fifantohan'ny varavarankely hahafahana mampiasa azy amin'ny faritra misy efijery marobe. Misy ihany koa ny safidy ho an'ny menio haseho ho toy ny sub-menio amin'ny bokotra iray amin'ny haingon-trano eo am-baravarankely. Ny menio dia azo aseho eo amin'ny efijery isaky ny maniry ny mpampiasa.
Masinina metadata haingana kokoa ary azo itokisana
Misaotra ny asa tohanan'ny BlueSystem, ny rindrambaiko fikarohana backend fitehirizana semantika dia nahita mihoatra ny 240 bibikely raikitra ary fanatsarana maro hafa. Ny tena lehibe dia ny mpanondro index vaovao, izay mahatonga ny fanaovana index haingana sy matanjaka kokoa.
Nepomuk Cleaner dia fitaovana vaovao tsotra amin'ny fitantanana fitehirizana semantika. Ilaina amin'ny fanadiovana, ny tsy mety na ny tahirin-kevitra mitovy. Ny fihazakazahana ny mpanadio aorian'ny fanavaozana dia afaka manome fanatsarana hafainganam-pandeha lehibe.
New Manager Manager
Ny fanamboarana ny mpanonta sy ny fibaikoana ny asa ary ny fikojakojana asa dia mihatsara amin'ny fampiharana vaovao an'ny Print Manager. Ny applet plasma dia mampiseho mpanonta misy ary manome fidirana sy fanaraha-maso ny asa milahatra.
Ny efijery fananganana rafitra fanahafana dia ahafahan'ny mpampiasa manampy sy manala mpanonta, manome topimaso ireo mpanonta ankehitriny, miaraka amin'ny fidirana amin'ireo asa fanaraha-maso manan-danja toy ny fizarana sy ny fisafidianana mpanonta default.
Ny New Printer Wizard dia misafidy ho azy ireo mpamily sahaza azy ary mifehy ny fikirana ho an'ny fitaovana ekena. Ireo fitaovana Print Manager vaovao dia mifanaraka tanteraka amin'ny zanatam-panontana CUPS, izay miteraka valiny haingana sy azo antoka avy amin'ny fampahalalana.
Mpitantana rakitra Dolphin
Ny mpitantana ny fisie Dolphin Nahita fanamboarana bibikely maro, fanatsarana ary fiasa vaovao izy io. Ny famindrana rakitra mankany sy avy amin'ny telefaona na fitaovana finday hafa dia mora kokoa ankehitriny miaraka amin'ny fanohanan'ny fitaovana MTP, izay haseho ao amin'ny tontonana Places.
Ny haben'ny sary masina dia azo ovaina ankehitriny, ary ny safidy azo ampiasaina sy azo idirana hafa dia nampiana. Dolphin dia manana fahaizana mitory ny lahatahiry ankehitriny sy ny rakitra ao amin'ny manager manager (voafehy ao amin'ny System Settings). Nisy ihany koa ny fanatsarana isa nahavariana.
Ny fandefasana fampirimana, miaraka ary tsy misy topi-maso dia haingana kokoa izao ary tsy mila fahatsiarovan-tena kely kokoa mandritra ny fampiasana ireo processeur rehetra azo atao haingana araka izay azo atao. Nisy fanatsarana kely natao tamin'ny safidy fikarohana, fitarihana ary fitetezana. Mandray soa avy amin'ny fanatsarana ny tahirin'ny birao semantika sy ny backend fikarohana ihany koa ny feso feso, mampihena ny loharanom-pahalalana takiana amin'ny fikirakirana metadata.
Fampandrenesana tsy dia manelingelina an'i Kate
Kate, nahazo fanatsarana tamin'ny faritra maro ny Advanced Text Editor. Kate dia manana rafitra fampandrenesana nohatsaraina, 'minimap' tsy voatery atao toy ny bara horonan-taratasy, plug-in fitantanana tetik'asa, rafitra loko efa voafaritra, fanatsarana ny interface scripting, ary maro hafa.
Ireo fanatsarana rehetra ireo dia mahasoa ihany koa ireo rindranasa izay mampiasa Kate amin'ny fanitsiana lahatsoratra, ao anatin'izany ny tonian-dahatsoratra maivana KWrit y Fampivoarana.
Fanatsarana ny konsole
Konsole mamerina ny fanontana amin'ny efijery sy ny fiasan'ny fandefasana signal izay efa nisy taloha KDE 3ary koa ny safidy hanovana ny elanelana misy ny tsipika sy ny fitakiana fanalahidy CTRL rehefa misintona lahatsoratra tsy hidira. Fanohanana vaovao ho an'ny xterm ary ny fahaizana manadio ny zotra baiko alohan'ny hampiasana tsoratadidy ho an'ny baiko sasany.
Tiled Rendering hanatsarana ny fampisehoana Okular
Okular, mpijery antontan-taratasy universal an'ny KDE, dia mitondra fiasa vaovao ihany koa. Ny fiasa vaovao dia misy teknika antsoina hoe Tiled Rendering izay mamela an'i Okular hanamora haingana kokoa sy haingana kokoa ary mampihena ny fihinanana fahatsiarovana raha oharina amin'ireo kinova taloha.
Nihatsara ny fiasan-dahatsary nakambana. Ny fanovana sy ny famoronana anotasy amin'ny Okular dia nanjary mora kokoa tamin'ny fampidirana ny QTabletEvents. Endri-javatra vaovao iray mamela ny fitetezana mora amin'ny tantara, izay azo idirana amin'ny alàlan'ny bokotra mandroso sy mihemotra.
Nahazo fanampiana i Gwenview ho an'ny activités
Gwenview, ilay mpijery sary KDE, dia manana fikirakirana sy fanaovana sary kely tsara kokoa, ary koa fanohanana ireo hetsika. Izy io dia manohana ny fanitsiana loko JPG sy PNG, miara-miasa amin'ny KWin handraisana ireo mombamomba ny loko an'ny mpanara-maso samihafa, ahafahan'ny fanaovana sary tsy tapaka ny sary sy sary.
Miasa amin'ny laoniny izao ilay mpanafatra sary Gwenview, mampiseho ny sary rehetra azo jerena na dia ao anaty fampirimana voafaritra aza.
Ny Kontact dia manatsara ny zava-bita
Ny fampiharana ny KDE PIM Nahazo amboarina sy fanatsarana bibikely maro izy ireo. Ny asa lehibe miaraka amin'ny mpizara fikarohana dia nanatsara be indrindra ny fanoratana sy ny fahazoana ny mailaka, manatitra ireo fampiharana mavitrika indrindra amin'ny fampiasana loharano ambany indrindra.
KMail manana fahaiza-manao vaovao hanova ny habeny ireo sary niraikitra tamin'ny hafatra mailaka, azo alamina ao amin'ny fikirakirana KMail.
KMail izy io koa dia manolotra fanitsiana mandeha ho azy ny soratra, ao anatin'izany ny fanoloana ny teny na ny kapitaly amin'ny litera voalohany amin'ny fehezanteny. Ny fizarana sy ny lisitry ny teny dia zaraina amin'ny Calligra ary azo alamina.
Nanitatra ny fanohanana HTML ho an'ny mpamoron-kira: ny latabatra dia azo ampidirina amin'ny fibaikoana laharana sy tsanganana, ary koa ny fahaizana manambatra sela. Ny fanampiana dia ampiana ihany koa ho an'ny haben'ny sary voafaritra, ary ny fahaizana mampiditra code html mivantana.
Fanatsarana hafa ho an'ny KMail ampidiro ao: manokatra fisie vao tsy ela ao anaty mpamoron-kira, manampy fifandraisana vaovao avy hatrany KMail ary apetaho ireo rakitra Moscow amin'ny mailaka. Ny mpamosavy manafatra dia nanohana omby hanafatra toerana avy Opera Mail, fikirakirana sy data Mailaka claws y Rakitry ary ny mari-pamantarana fandefasa-mailaka Thunderbird y Mailaka claws.
Fanatsarana ny fampiharana lalao lehibe
Ny lalao fanabeazana sy ny fampiharana KDE dia nahita fiovana niely. Ireo lalao dia nahazo tombony tamin'ny fanatsarana lehibe ny tranomboky lehibe. Nihatsara KTouch, mpitaiza mpanoratra ary lalao vaovao no tafiditra amin'ity kinova antsoina hoe Picmi ity.
Nohatsaraina ny lalao sy ny fampiharana KDE fanabeazana hafa, ao anatin'izany ny fahafahany manonta ankamantatra Ksudoku mba hahafahan'izy ireo mampiasa ivelan'ny solosaina. KGoldrunner dia nosoratana indray miorina amin'ny tranomboky kdegames vaovao; ny gameplay sy ny interface ny mpampiasa dia mitovy, fa ny lalao kosa dia tsara tarehy sy malama.
Ny KJumpingCube izao dia mamela anao hanitsy ny hafainganan'ny fivezivezena ary hamelona ny fihetsiketsehana mba ho mora azo kokoa. Nohatsaraina ny fifandraisan'ny mpampiasa ary azonao atao izao ny misafidy izay tianao tadiavina: Kepler na Newton. KAlgebra dia nanatsara ny interface interface ary nahazo mpamoaka lohahevitra ny Peers.
Ireo sy ireo zava-baovao dia azo jerena ao amin'ny Ity rohy ity ary ao ity hafa ireo endritsoratra nampiasako tamin'ity lahatsoratra ity .. Inona no holazaiko? KDE Isan'andro dia mifankatia kokoa aho ..
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » KDE SC 4.10 Azo alaina: Andao hojerentsika izay vaovao
Alaim-panahy hanavao aho.
havaozina amin'ny openSUSE ary jereo ny fanatsarana ny KDE SC 4.9.5
Adiny 3 vao havaozina?
Eny, fonosana marobe no nohavaozina
efa misy Chakra izao ???? Vonona ny hanandrana azy aho.
Eny, efa ao amin'ny toeran'ny Chakra miorina io, na dia tsy maintsy nanandrana indroa aza aho satria tsy nisintona ny kinova oksizenina vaovao ho fiankinan-doha, fa amin'ny farany namboarina daholo ary niaraka tamin'ny KDE 4.10!
^ ___ ^ calligra 2.6 ihany koa, ny fifindra-monin'ny mariadb. ary ny iso vaovao an'ny Chakra 2013.02 "Benz" dia andrahoina
Eny !!! Efa ho 700mb ny misintona ary manana izany fototra izany aho.
Faly ny sombin'ny rafiko rehetra !!! 😀
tsia, naharitra 1 ora teo, nanavao ny fonosana 270 teo ho eo.
codelab dia hoy izy:
Fanatsarana be dia be amin'ny fampisehoana sy sary, ry zalahy avy ao amin'ny KDE miaraka amin'ny vaovao tsara hatrany!
Amin'izao fotoana izao dia hanohy ny 4.9.5 aho ary hiandry kely ny hisian'ity kinova vaovao ity eo amin'ny biraoko. Heveriko fa mihabetsaka ny mpampiasa mifindra monina any amin'ny distro miorina amin'ny KDE noho ny adihevitra malaza Gnome (Kanelina, Mate, Firaisankina ary fianakaviana hafa) sy ny asa tsara nataon'ny ekipan'ny KDE.
Mamaly amin'ny codelab
Ferthedems dia hoy izy:
Lahatsoratra iray tena niasa sy fampiroboroboana tsara ho an'ny KDE 4.10 vaovao, arahabaina.
Angamba indray andro any dia hitsambikina aloha aho ao anaty pisinina ary hanao fifindra-monina tanteraka amin'ity tontolo ity izay, tsy isalasalana, amin'ny fahamatorana sy ny fahafaha-manao dia azo ampitahaina. Amin'izao fotoana izao dia mbola mifikitra be amin'ny tontolo iainana GTK aho.
Misaotra an'ity asa tsara ity!
Valiny amin'ny Ferthedems
Mandrosoa, inona no andrasanao. Nampiasa ny Gnome nandritra ny fotoana ela aho, nomeko ny Gnome 3 ny vintana, fa ny fanombohana ny fampiasana ny KDE dia fanapahan-kevitra tena tsara.
Mampiasa Kubuntu aho izao, izay, notazonin'ny BlueSystem, dia lasa fizarana tena tsara. Tsy misy na Ubuntu na Gnome mety tsy ho hitanao ao amin'ny Kubuntu.
Avelanao ho liana tanteraka amin'ny lohahevitra Kubuntu aho, ny tena marina dia efa nanandrana distros maro aho fa rehefa nanandrana kubuntu (tsy maintsy ho tamin'ny Paleolithic) dia nilamina izany ary tsy noraharahiako izany.
Toa mahaliana ahy tokoa io lazainao io; Mieritreritra aho fa ho an'ny 13.04 dia hosedraiko amin'ny KDE vaovao 😀
Nihatsara ve ny fampidirana amin'ireo rindranasa GTK?
Mazava ho azy fa ny hevitro manetriketrika, tamin'ny nifindrako ho any amin'ny KDE dia nanandrana an'i Chakra sy Sabayon aho, izay fizarana tsara miaraka amin'ny lafy tsarany sy ny lafy tsarany. Farany nametraka Kubuntu 12.04LTS aho ary eo no simba izy io, tsy nanana olana aho ary voaray tsy tapaka ny fanavaozana, amin'ny alàlan'ny backports ampiasaiko ny KDE 4.9.5, manantena aho fa hiseho ihany koa ny 4.10
Ny fampidirana amin'ny GTK, tsy mahita olana lehibe aho ... Gimp, Firefox, Inkscape, sns ...
Well kubuntu dia distro tena tsara, amin'izao fotoana izao dia miandry ny kubuntu 13.04 sy ny voninahiny rehetra aho satria miaraka amin'ny kinova LTS dia tena gaga aho izao fa mampiasa windows aho noho ny antony miasa, saingy mifanerasera tsara amin'ny karbon sy krita aho, izaho Nitsapa azy ireo betsaka aho mba hahafahako milaza fa mahatratra gimp sy inkscape izy ireo fa amin'ny ambaratonga haingana 🙂
Byte dia hoy izy:
Fantatro ny tsiro amin'ny loko, saingy ity no tontolon'ny birao tsara indrindra eran'izao tontolo izao, ary na i Apple aza tsy manao zavatra lehibe amin'ny OSX tahaka ny fanaon'ireo bandy ao amin'ny KDE.
10+ ho an'ny fiarahamonina KDE tsara.
Mamaly an'i Byte
Mampalahelo fa ny fiheverana an'io dia mety hiteraka lelafo, saingy marina fa manatsara be ny KDE isaky ny dikanteny, ary miha feno hatrany izy io. Izany no antony mahafaly ahy indrindra, saika tsy misy ilana azy ..
Ny zavatra tokana tsy hita dia ny fork bebe kokoa hahatratrarana Gnome, ha: p
Ho an'ireo toa ahy dia tsy miseho na tsy miasa ho azy ireo ny fiaviana mihetsika. ny vahaolana dia ny fametrahana ny fonosana "kdeplasma-addons" izay iray ihany koa izay mamorona fampirimana fanampiny ao amin'ny ~ / .kde / share / apps / plasma / wallpaper
Misaotra ireo naman'i Leanuxeros tamin'ny fampahalalana.
Tena tsara ... Ho hitantsika ny fandehan'ny fandaniana amin'ny ankapobeny ny rafitra. Na izany na tsy izany, tsy maintsy miandry isika mandra-pahatongany any amin'ny toeran'ny andrana Debian na hampiasa OpenSUSE 12.3 izay havoaka afaka 34 andro .. 🙂
Zironid dia hoy izy:
Misy hevitra ve rehefa mety mamely ireo repo fitsapana?
Valiny tamin'i Zironid
Andraso hipetraka, na hatory raha tianao ny xDDD
rsantander06 dia hoy izy:
Mamaly an'i rsantander06
Vao avy namaky ilay lahatsoratra momba ny hatsiaka fitsapana debian aho :, (
Wow, ity dia mampiseho fa tsy mitovy amin'ny tontolo birao hafa izay mitodika any amin'ny làlan-kaleha.
Ireo fanatsarana rehetra ireo dia mahatonga ny KDE ho vokatra voadio, kanto ary mamokatra.
Tsy mihetsika avy amin'ny KDE aho, fa ny tsara indrindra fotsiny. Ankasitrahana ilay lahatsoratra tena tsara, ho avy tsy ho ela ny fanavaozana ireo disro.
Lahatsoratra iray mankasitraka ny halehiben'ny KDE ary koa miaraka amin'ireo fanehoan-kevitra manohana azy…. olona salama saina ihany amin'ny Internet !!
Tsy haiko izay miandry ny distros hanome boom bebe kokoa an'i KDE, mampiroborobo birao foana izy ireo very ilay foto-kevitra, jereo, manandrana mahita ny fampiasana ny gnome3 aho fa tsy misy.
Matthews dia hoy izy:
Rahampitso dia andramako any Chakra izany, ny fandresenao !!
Valiny tamin'i Matthews
Andao hojerentsika rehefa tonga any amin'ny repos stable an'ny Arch.
Vaovao be ity.
Manantena ny hisehoako ao amin'ny repos Chakra aho.
(Mariho fa manome hevitra aho alohan'ny hamakiana)
Naheno koa aho fa nisy fihatsarana lehibe ho an'i Nepomuk fa azonao atao ny misafidy ny hanisa ireo rakitra fotsiny amin'ny anarany, IZAY IZAY IZAO NO ilaiko !!! Tsy voatery hofoanako intsony izy io noho ny fanjifany be !! 😀
Schweik dia hoy izy:
Ny KDE, haavo hita maso, tena fitarihana ny retina an'ireo miasa amin'ny solosaina. Tena baroque-rococo.
Ary ny an'ny Gnome, manomboka amin'ny autiste ka hatramin'ny zoombis ...
Amin'izao fotoana izao dia miloka amin'ny consort-x3 avy amin'ny SolusOS aho.
Mamaly an'i Švejk
9:09 PM Fotoana kolombiana, efa misintona ny KDE 4.10 ao Chakra ^^ aho
Tena tsara, tsara ho an'ny bandy KDE, arahaba soa.
Efa ho herintaona izao aho no tao amin'ny KDE, noho ny Gnome 3, ary tsy manenina aho, tsara tarehy izy io, azo ovaina azo ovaina, ao anaty ny toerany daholo ny zava-drehetra. Araka ny nolazain'i Elav: "isan'andro aho dia tia bebe kokoa"
Misaotra ny naoty Elav.
Miarahaba antsika rehetra. XD
Toa maka fanahy loatra ny miverina any amin'ny KDE ary miaraka amin'ny fanatsarana sy fanitsiana maro dia maro, azoko antoka fa raha vantany vao ao amin'ny repo-tsanganana ireo dia andramako: p
Mahafinaritra… saingy teo amin'ireo fanatsarana rehetra dia hadinon'izy ireo ny nanatsara ny fisehoan'ny sary masina mahatsiravina ao amin'ny lahatahiry fonosana Oxygen. Fanindroany…
Pf, fa ny fanovana ny sary masina no tsotra indrindra misy.
Ampiasaiko izao: https://blog.desdelinux.net/potenza-nuevo-bonito-y-completo-set-de-iconos-para-nuestro-linux/
Tena tsara izy ireo.
Tsara tarehy izy ireo saingy tiako kokoa ny K-Hi-Lights → http://lamiradadelreplicante.com/2012/12/12/k-hi-lights-3-4-interesante-coleccion-de-iconos-para-kde/
Nanjary tiako Oxygen io, na dia indraindray aza nametraka KFaenza aho.
fernan do dia hoy izy:
Ratsy loatra ny Fedora 18 tsy tonga miaraka aminy amin'ny alàlan'ny default.
Valio amin'i fernan do
Tena ratsy fa androany vao nametraka PC-BSD dia mitondra KDE 4.9.3 uu
Mmmmm manao ahoana ianao BSD?
Hatreto aloha, ny zava-drehetra mandeha tsara amin'ny fametrahana dia manantena fotsiny aho fa ho tonga haingana amin'ny Rolling-Release x)
Raha te hanavao ny KDE 4.10 amin'ny openSUSE dia azonao atao ny mijery an'ity lahatsoratra ity http://guiadelcamaleon.blogspot.com.es/2013/02/como-instalar-kde-410-en-opensuse-122.html
Ary ahoana no hamahako ny fiankinan-doha amin'ny chakra? tsy afaka manavao aho
Albert dia hoy izy:
Inona no olana?
Manana trano fitahirizana vaovao ve ianao?
Tokony hampiasa ny "mirror-check" ianao hanamarinana fa ny repositories rehetra dia havaozina satria misy ny sasany izay tsy hafainganam-pandeha toy ny hafa amin'ny fanavaozana sy ny sasany izay ampiasaina ho dika mitovy
Valiny tamin'i Albert
Salama Elav. Tsy mbola namaky ilay lahatsoratra aho; Vao avy nijery aho. Toa maka fanahy be ny mampiasa KDE, fa raha tsy manova ekipa aho dia hifikitra amin'ny Xfce. Mampalahelo fa tsy manoratra momba ny Xfce intsony ianao: tena malahelo ireo lahatsoratra nozarainao momba izany aho teo aloha. Na izany na tsy izany. Na eo aza izany, manohy mizara zavatra maro hafa ianao. Misaotra anao.
Na dia mpampiasa KDE aza aho dia marina ny anao. Mbola tadidiko ihany rehefa nanoratra lahatsoratra mahaliana momba an'i Xfce i Elav, ary tadidiko fa nihaona tamina Desdelinux nitady marina ny dock ho an'i Xfce aho, noho ny lahatsoratra iray momba ny wbar raha tsy diso aho, na toy ireo lohahevitra, ny famakafakana ary ireo zavatra madinidinika. Saingy tsy fanakianana izany, fa misy zavatra nostalgia tonga tamiko hahaha, tsara sy tsara tarehy KDE ka hadinoko tanteraka izany. Cheers…
Farany, andrana ao Chakra
Faly, mbola miandry amin'ny Arch aho hehehe. Fa miadana nefa azo antoka.
Izy io dia miasa toy ny hatsarana, afa-tsy ny hoe tsy maintsy niady mihoatra ny mahazatra tamin'ny fifandraisana wifi aho. Etsy ankilany, ny olana nananako tamin'ny efijery dia raikitra, izay nibolisatra be rehefa nampifandray ilay adaptatera herinaratra, na rehefa nidina na nitombo ny famirapiratana.
raha tsikaritro fa nitombo ny fihinanana fahatsiarovana ankapobeny, ary tsy tsotra intsony izao ny mamono ny Nepomuk + Akonadi.
Debian Gnu / Linux dia hoy izy:
Tena tsara. Tiako ny fanatsarana an'i Konsole.
Valiny amin'i Debian Gnu / Linux
Inona no nataon'izy ireo tamin'i Kosnole?
Ny KDE dia tontolon'ny birao VERY be dia be. Tsy misy isalasalana ny amin'izany.
Ary ny GNOME dia mitsikera azy ny rehetra, fa rehefa ela ny ela dia ho hita eo raha ratsy toa ny voalazan'ny rehetra. Mampiasa GNOME aho, indrindra satria tsy zatra KDE.
Homena azy eo amin'ny 6 eo ho eo aho fa amin'ny fotoana maharitra dia miverina amin'ny fahatsoran'ny GNOME foana aho.
Maminany ho avy tsara ho an'ny GNOME aho, angamba ao anatin'ny 2 taona. Tsy misy holazaina momba ny KDE afa-tsy ny chapó!
TUDz dia hoy izy:
Efa misy ny fonosana ao amin'ny Arch Linux. Ny olona rehetra «sudo pacman -Syu» 😀
Mamaly an'i TUDz
noho ny antony hafahafa ao amin'ny archlinux dia tsy afaka manova ny menio aho ... raha tsy izany dia milamina ny zava-drehetra dia tsara kokoa (Y)
Mariho fa efa misy ao amin'ny Kubuntu io.
Tao amin'ny Kubuntu 12.04 dia nahazo ny fanavaozana tamin'ny alàlan'ny repository backports aho.
Eny, io no ampiasaiko izao 😀
Efa ela aho no tsy nanandrana ny KDE 🙁
Diego Campos dia hoy izy:
Ny KDE dia tsy isalasalana fa birao lehibe iray, mampalahelo fa mahatsiravina ny fampidirana amin'ny LibreOffice 🙁
Valiny tamin'i Diego Campos
Ao amin'ny Kubuntu toy ny ao amin'ny Debian dia toa tafaray tanteraka aho .. Afaka mahita ohatra mazava ianao eto .. Midika izany fa hitako tsara 😀
Efa nanandrana calligra ve ianao?
Raha mampiasa pclinux os ianao dia tsy maintsy fantarinao ny fomba fampidirana azy xD, io dia bibikely gtk oxygen
Eny, marina tokoa, hatreto fa ny menus dia mahavariana izy ireo, izany hoe, efa-joro tsy misy aloka, curvature sns, tsy mitovy amin'ny menus tsara amin'ny fampiharana KDE izany. Farafaharatsiny mba tsy dia tsara ny fizarana KDE izay efa nanandramako (Fedora sy OpenSuSE), tsy haiko hoe manao ahoana ny Kubuntu miaraka amin'ny KDE 4.10 🙁
http://i.imgur.com/fsBnN.png <=== Toy izao no fahitan'ireo menus ao amin'ny KDE izay efa nosedraina ary tsy toa ny menus fampiharana KDE akory izany
Omeo ahy dia hoy izy:
Aza adino fa ny birao maimaim-poana dia tsy avy ao amin'ny kde, fampiharana hafa izy io
Valio amin'i DANAME
Mizaha toetra ny mpampiasa ahy aho
Mendrika ve ny ezak'i Steam hamindra lalao amin'ny Linux?
Pacman ao amin'ny Debian, Ubuntu sa Fedora?